Fiparitahan'ny valanaretina :: Mitombo isa ireo mararin’ny «coronavirus” vokatry ny fifampikasohana • AoRaha
Niakatra hatrany ny isan’ireo olona eto Madagasikara mitondra ny tsimok’aretina « Covid-19 » noho ny fifampikasohana, avy tamin’ireo mararin’ny «coronavirus ». Niampy efatra ireo voasokajy ho narary vokatry ny fifampikasohana raha efa nisy roa teo aloha. Olona tsy nifanerasera tamin’ireo avy any ivelany tamin’ireo zotrampiaramanidina tonga teto amintsika teo anelanelan’ny 11 marsa sy 19 marsa lasa teo izy ireo, fa nifandray kosa tamin’ireo teratany vahiny mpizaha tany efa narary nandritra ny fotoana nandalovany teto Madagasikara.
Malagasy avokoa iretsy marary vaovao iretsy. Vehivavy 43 taona ny iray, avy eto Antananarivo, lehilahy 49 taona avy eto Antananarivo sy lehilahy 30 taona avy any Toamasina ary Ankizilahy 13 taona avy eto Antananarivo. Marihina fa efa nampidirina hopitaly avokoa izy ireo.
«Nisy olona telo vaovao voatily fa mitondra ny tsimok’ aretina «Covid-19”, omaly hariva (Ndrl: afak’omaly). Nisy iray hafa koa voatily, anio maraina hatramin’ny 12 ora (Ndrl:omaly) fa nahitana ny aretina. Vokatry ny fitiliana avy any amin’ny Institut Pasteur de Madagascar ireo. Niakatra ho efatra amby dimampolo izao ny olona voaporofo fa voan’ny «coronavirus» manerana an’ i Madagasikara», hoy ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, nandritra ny fampitam-baovao, tamin’ny televiziona Malagasy, omaly tamin’ny 1 ora sy sasany antoandro.
Notsindriany fa tsy misy soritr’aretina ivelany ny telo amin’izy ireo. Tao anatin’ ny fitadiavana an’ireo olona nifampikasoka tamin’ireo mpizaha tany no nahitana azy. Ilay lehilahy any Toamasina no misy soritr’aretina, manavy sy mikohaka. Tsy misy atahorana ny toepahasalamany fa arahimaso akaiky any amin’ny hopitaly avokoa.
Tsy tafiditra ao anatin’ ireo efatra amby dimampolo ireo kosa ireo olona fito voatily ho mitondra ny tsimok’ aretina nandritra fitiliana ahazoam-baliny haingana (TDR) natao afak’omaly. Mbola hatao fitiliana antsoina hoe « test d’amplification des acides nucléiques » na PCR any amin’ny Institut Pasteur de Madagascar izy ireo.
«Karazana fitiliana roa samy hafa ireo. Ny PCR dia mijery ny tsimok’aretina ao anatin’ilay olona fa TDR kosa no hijerena raha efa nandalo tao amin’ilay olona ny are tina. Raha ohatra izy ka «positif» tamin’ilay TDR dia tsy maintsy hatao PCR haingana. Tsy maintsy hatoka-monina mandritra ny andro vitsy ilay olona satria mbola misy tsimok’aretina ao anatiny. Ny vatany matanjaka, nahita nanohitra ny «coronavirus”, fa ny manodidina azy mety harefo», hoy ny profesora Randriamanantany Zely, talen’ ny sampan-draharaha misahana ny famindrana ra (DTS).
Fandikana fepetra :: Nakaton’ny polisy ireo tsena tamin’ny faritra enina
Fizarana fanampiana :: Nisavorovoro ireo mpanasa lamba